मन्त्री भन्छन् ‘गरिबी निवारण मन्त्रालय खारेज गरे हुन्छ’ - Himalayan Kangaroo
मन्त्री भन्छन् ‘गरिबी निवारण मन्त्रालय खारेज गरे हुन्छ’
Posted by Himalayan Kangaroo | १२ चैत्र २०७३, शनिबार ०१:५७ |
काठमाडौं। सरकारले गरिबी निवारणसम्बन्धी ४६ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर, ती कार्यक्रम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट होइन, अन्य १४ मन्त्रालयबाट सञ्चालित छन् ।
देशभर करिब ६१ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ०७० मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन छ । ती गरिबको गरिबी निवारण गर्न बनेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबका लागि एउटा कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरेको छ । करिब १ अर्ब ६७ करोड बजेट रहेको मन्त्रालयले पश्चिमी उच्च पहाडी जिल्ला गरिबी निवारण कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरेको छ । यो कार्यक्रम बझाङ, बाजुरा, दैलेख, हुम्ला, जाजरकोट, कालिकोट, रोल्पा र रुकुममा सञ्चालित छ ।
गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालित छ । तर, मन्त्री थानीले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मातहत राख्न माग गरेका छन् । कोषको ऐनमा सम्पर्क मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय हुने उल्लेख भएकाले गरिबी निवारण मन्त्रालयमा लैजान नमिल्ने मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले बताए ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबीका कार्यक्रम आफ्नो निर्णयमा सञ्चालन गर्न नपाएको मात्र होइन सहकारी तर्फको निर्णय पनि अर्को मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा कृषिमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । बोर्ड ऐन २०४९ मा कार्यसञ्चालनका लागि गठित कार्यकारी समितिको अध्यक्ष कृषिमन्त्री वा राज्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । ऐनमा बोर्डको सम्पर्क मन्त्रालय पनि कृषि मन्त्रालय नै तोकिएको छ । तर, बोर्डको अनुगमन र व्यवस्थापनको काम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।
हृदयराम थानी, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री
गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम अन्य १४ मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती कार्यक्रम यस मन्त्रालयबाट सञ्चालन गरौँ भन्दा कोही मान्दैनन् । यस्तो अवस्थामा यो मन्त्रालय किन राख्ने ? खारेज गरे हुन्छ ।
के गर्दै छ गरिबी निवारण मन्त्रालय ?
१) गरिब घरपरिवार पहिचान : सरकारले असोज मसान्तभित्र २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्न र पहिचान भएकालाई परिचयपत्र वितरण गरिने निर्णय गरेको थियो । गरिब घरपरिवार पहिचान सहयोग समन्वय बोर्डले माघ अन्तिम साता मात्र काम सकेको छ । बोर्डले २५ जिल्लाका करिब तीन लाख ९४ हजार जनसंख्यालाई गरिब भनेर पहिचान गरेको छ । तर, बोर्डको बैठक बसी औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।
२) गरिबी निवारण नीति बनाउँदै : सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रलायले गरिबी निवारण नीति मस्यौदा बनाउँदै छ । मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले मस्यौदामाथिको छलफल यसै साता टुंगिने बताए । मस्यौदाको अन्तिम टुंगो लागेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ ।
३) गरिबका लागि सरकार कार्यक्रम बनेन : प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १९ असोजमा गरिबका लागि सरकारी कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कायालयमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत् कार्यक्रम सञ्चालनबारे छलफल भएको थियो । गरिबका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा विस्तृत कार्ययोजना पेश गरेको थियो । मन्त्रालयले आफनै बजेटबाट आयआर्जन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रबाट गरिबसँग काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, यो विषयमा त्यत्तिकै सेलाएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरिब घरपरिवारको पहिचानलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । गरिबका लागि सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको अभियान कानुन मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको छ । तर, उत्पादनमुलक कार्यक्रम भने सञ्चालनमा छैन ।
४) राष्ट्रिय सहकारी ऐन : राष्ट्रिय सहकारी ऐन संसद्को अर्थ समितिमा पुगेको छ । सहकारीको सुशासन, स्वनियमन र आन्तरिक नियन्त्रणका लागि सहकारीमा रहेका पदाधिकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने गरी मस्यौदा बनेकाले सांसद रहेका सहकारी सञ्चालकले यसको विरोध गरेका छन् ।
५) यी पनि गर्दैछ मन्त्रालयले : सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरि सञ्चालनमा रहेका करिब ३३ हजार सहकारीमध्ये उत्पादनमा लागेका सहकारीको सहजीकरणका लागि भण्डारकेन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानका अनुसार चितवनको भरतपुर र ललितपुरको लगनखेलमा बजारका लागि सहकारी कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने तयारी छ ।
सहकारीहरूलाई अनुदान वितरणका लागि कार्यविधिसमेत मन्त्रायले बनाएको छ । ‘पहिला दुई-तीन करोड रूपैयाँसम्म सहकारीलाई दिन सकिने व्यवस्था थियो, तर अहिले कार्यविधि बनाएर ३० करोडसम्म पुर्याएको छौं,’ प्रधानले भने । उनका अनुसार त्यस्तो रकम सहकारी डिजिजन कार्यालयबाट नै दिइनेछ ।आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
Previousनेपालका विश्वसम्पदा खतराको सूचीमा पर्ने सम्भावना
Nextओबामा केयरविरुद्व ट्रम्प संर्घषरत
विश्वकप फुटबलमा हार्नेलाई पनि पुरस्कार,कसले कति पाउँछन् ?
२९ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ११:३९
भोलिसम्म जसरी भएपनि सहमतिमा पुग्नुपर्छ : कोईराला
१४ कार्तिक २०७१, शुक्रबार १५:१८